श्रीमती मार्ने डाक्टरलाई जन्मकैदको मांग गर्दै बीरगन्जनमा प्रदर्शन – Mission Khoj
श्रीमती मार्ने डाक्टरलाई जन्मकैदको मांग गर्दै बीरगन्जनमा प्रदर्शन
वीरगंज,१६चैत । कुटकुटी आफनो श्रीमतीको हत्या गर्ने डाक्टरलाई सर्वस्व सहितको जन्म कैदको सजाय मांग गर्दै बीरगन्जमा प्रदर्शन भएको छ ।
बीरगन्जका अधिकारवादी तथा सचेत नागरिकहरुले श्रीमती मार्ने चिकित्सक श्रीमान डा. सचितानन्द यादवलाई जन्मकैद गर्नु पर्ने मांग गरेका हुन ।
नारायाणी अस्पतालमा कार्यरत मधुमेह तथा थाइराइड रोग विशेषज्ञ डा सचितानन्द यादवले चैत ६ गते बुधबार होलीको दिन जेठी श्रीमती सुनिता यादवलाई निर्घात कुटपिट गरेका थिए । सख्त घाइते भएकी सुनिताको उपचारको क्रममा हिजो साझ मृत्यु भएको हो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं २० स्थित हरपतगञ्जकी ४५ बर्षीया सुनीता यादवको शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा शुक्रबार निधन भएको हो ।
होलीको दिन सुनितालाई अचेत अवस्थामा उद्दार गरेर उपचारका लागि गण्डक अस्पतालमा र्पुयाइएको थियो । आईसीयूमा राखेर उपचार गर्दा पनि अवस्थामा सुधार नआएपछि चैत १२ गते थप उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको थियो ।
सुनीता डाक्टर यादवको जेठी श्रीमती हुन् । डा. सचितानन्द वीरगञ्जमा डा. एसएन यादव नामले परिचित छन् । श्रीमतीलाई कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरीले यादवलाई नियंत्रणमा लिइएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको हिरासतमा राखिएको छ ।
यादवले विधुत आइरन तताएर श्रीमतीको शरिरमा डाम्नुको साथै निर्घात कुटपीट गरेको माइती पक्षले जनाएको छ । जानमार्ने उद्योगमा माइती पक्षले डाक्टर यादव तथा तथा उनका परिवारका ४ जना सदस्यकोनाममा किटानी जोहेरी प्रहरीलाई दिएका छन् ।
सुनीता यादवका माइती पक्षले डा सचितानन्द यादव, उनका बुवा नागेन्द्र यादव , आमा आशादेवी र भाइ अचितानन्द यादवविरुद्ध चैत १२ गत नै मुद्धा दर्ता गराएका छन् ।